मान्छे किन कुरुप छ ? - Jhapa Online
भनिन्छ– मानिस भगवानको एउटा सुन्दर रचना हो । प्रकृतिको अनुपम उपहार हो । स्र्वश्रेष्ठ प्राणी हो । के त्यो भगवानको एउटा सुन्दर रचना साँच्चै सुन्दर छ ? यो एउटा गहन प्रश्न हो । किनकि, वर्तमानले त्यसको सटिक उत्तर दिन सक्ने अवस्था छैन ।
यदि सुन्दर रचना हो भने किन समाज विकृत छ । किन मुलुक विकृत छ ? किन विश्व विकृत छ ? सुन्दर रचना हो भने यी सबै कुरा सुन्दर हुन्थे होला । अर्थात, समाज, देश र विश्व विकृतिमुक्त एवम् सद्भावपूर्ण–प्रेममय । तर, वर्तमानमा मानिसलाई मात्र बाद गर्ने हो भने सबै सुन्दर छ ।
पहाड सुन्दर छ, नदीनाला, हिमाल, फूल, पशु–पंक्षी, प्रकृतिका हरेक अवयव सुन्दर छन् । तर, किन मानिस मात्र सुन्दर रचना भएर पनि सुन्दर छैन ? मानिस मात्रै किन सुन्दर रचना भएर पनि कुरुप छ ? मानिसले नै सुन्दर प्रकृतिलाई समेत आफूजस्तै कुरुप बनाउँदैछ । दुषित बनाउँदै छ ।
कहिले जातको नाममा, त कहिले धर्मको नाममा, त कहिले धनी–गरीब यावत कुराका नाममा समेत मानिसले आफूले आफैँलाई कुरुप तुल्याइरहेको छ । यो किन ? मानिस किन आफ्नै वर्ग शत्रु बनेको छ ?
भौतिक स्वरुप मात्र सुन्दरता होइन । यसलाई सुन्दरताको एक मात्र मानक मान्न सकिन्न । किनकि सुन्दरताको परिधि भौतिक स्वरुपमा मात्र होइन, यसका कनेकन् आयम छन् । मन, मस्तिष्क, सोच, व्यवहार सुन्दर हुनुपर्छ ।
महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदनमा– ‘क्षेत्रीको छोरा यो पाउँ छुन्छ घिनले छुँदैन मानिस ठूलो मनले हुन्छ धनले हुँदैन’ लेखेका छन् । यो कुरा हामी पढेका छौँ, सुनेका छौँ, पढाएका पनि छौँ । तर, किन व्यवहार फरक छ । आदर्श वाक्य केवल बोल्नका लागि मात्र हो ?
पृथ्वीको उत्पत्ति आजभन्दा लगभग ४.६ अरब वर्ष पहिले भएको मानिन्छ । शुरुमा एक कोषीय जीव अमिबाबाट जीवनको शुरुवात भएको भनिन्छ । त्यही एक कोषीय जीवबाट विभिन्न चरण पार गर्दै वर्तमान मानिस बनेका हुन् । यो एउटा ‘विज्ञान प्रमाणित’ कुरा हो । भौगोलिक वातावरण अनुसार कोही, अग्ला, कोही होचा, गोरा–काला भए । उत्पत्तिको मार्ग एउटै हो भने मानिस वैभिन्न कसरी ? सारमा जोजस्तो भए पनि मानिस त मानिस नै हो । तर पनि मानिस आफ्नो बाहेक अरुको अस्तिव स्वीकार्न चाहँदैन । त्यसैले मानिस सुन्दर भएर पनि कुरुप छ ।
लायन्स क्लव अफ दमक झापा गठन
कोरोना अपडेट : आज झापामा ४०, प्रदेशमा ४८३ संक्रमित, ४९७ संक्रमणमुक्त र सातको मृत्यु